doro - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'doro'
Makwikwi ekumwa doro - Bocha vs Buhera
Veku Bocha nevekuBuhera vakawirirana kuti vaite makwikwi ekumwa doro.Mazuva emakwikwi ave kusvika vekuBocha vakatuma munhu kuenda kuBuhera kuti anonzwa kuti vekuBuhera vaive vagadzirira here.
Wasu akasvika akabvunza zvikanzi nevekuBuhera tava ready tatomirira zuva iroro. Asati aenda Wasu akapihwa sadza ndokudya. Apedza kudya sadza akaisirwa 25 litres yemasese ndokubva aimwa yese kuipedza. VekuBuhera vakashamisika kuti kune munhu anopedza 25 litres yehwahwa ega. Vakabvunza Wasu kuti: "ko nhai Wasu muchange murikukwikwidzawo here mumakwikwi ari kuuya aya"
Wasu akati:" kwete ini ndakadyirwa kumaprimary ekwedu"
doro wasu bocha buhera
doro bhawa chidhakwa
Pakuroorana pane zvinoregedzwa
Gal: Tiikaroorana unofanira kuregedza fodya
Boy : Horaiti
Gal : nedoro
Boy : iri bho.
Gal : hapasisina zvekuenda ku Down Town , kana kuBowls Club, ku eclipse toenda tese kana uchienda.
Boy : zviri munzeve
Gal : wosiyana nenyaya yekunoona bhora nemaface ako totsvaga Dstv redu bhora roonerwa mumba.
Gal : hapana chimwe chandasiya here? Chii chimwe chaunoda kurega? Boy: ndoda kurega ukuroora!
doro mukomana musikana
Chinoz - Zino for beer
Reporter: Nhai vachinoz munotii nenya ye xenophobia irikuitwa ku South Africa?
Chinoz: Okay nyaya ye zino for beer hainetse ini ndinongoti vharai mabhawa arikutengesa zino for beer mosiya atajaira anoda cash for beer
doro chinoz south africa xenophobia
Mfundisi abvunzwa nzira yeku posvo
Mufundisi akabvunza chidhakwa nzira yeku Post Office.
Aratidzwa nzira akatenda chaizvo mufundisi akati kuchidhakwa: "waitabasa wozouyawo kuchurch ndokuratidza nzira yekudenga ".
Chidhakwa chakadzedzereka chichiseka, chikati: "wozoziva yekudenga iwe wambotadza yekuPost Office?"
doro church chidhakwa pentecostal mufundisi denga
doro bhawa chipatara chiremba
Heat Wave ku Kariba haizotishayisi doro?
Whilst vamwe vese muri worried nekudyiwa kweChelsea, Ini I am equally worried nekupera kwemvura muKariba.
Fear yangu ndeyekuti mvura iyi haizoperi here zvekuti Delta inozoshaya mvura yekubikisa doro.
doro heat wave 2015 kariba dam chelsea fc 2015-16
Rufu rwaComrade Castle
Va Pilsner mutauri mukuru we National Breweries vanokuzivisai nezverufu comrade Castle,comrade Castle vanofungidzirwa kuti vakadhonha kubva pa hwaro hwechitatu hwe deep freezer uko vainge vashanyira shamwari kadzi yavo Black label.
Vanwi vose muri kukokwa kuzoviga gamba iri kumarinda eBohlingers cemetery ne mugovera, mutumbi wa comrade Castle uchatakurwa mangwanani emusi we svondo uchiendwa nawo ku CHIBUKU chapel uko comrade Barrameda vachapa mashoko ekukumikidza mushakabvu comrade castle.
Mutumbi wa comrade Castle uchazotakurwa munguva dze tatu uchiendwa nawo ku Dry Boots cemetry uko uchanovigwa ne mauto uye doctor kachasu vachipa ruremekedzo rwe gamba.Comrade castle vasiya mudzimai Eagle lager nevana vaviri Chateu na Amarula
doro makuva rufu
Yekudhakwa yakaoma! Mumwe mukomana akatenga guru ndokurisiya kumba nekuti magetsi ayenda. Akadzokera kubhawa ndokuzofunga kunobika pakadzoka magetsi, asi light rakabva ratsva.
Apinda mumba akabatabata pa table ndokutora guru rake ndokucheka cheka ndokuisa mupoto. Akaisa ma onion nemadomasi kuti zvinyatsoibva zvose.
Chakamunetsa ndechekuti rakaramba kuibva kusvikira apakura rimwe ndokudya zvakadaro achiti iguru rebhuru rachembera.
Ava mangwnani, akashanyirwa ne musikana wake iye asati amuka ndokuudza musikana kuti abike kasadza ke bhabharasi nekuti akasiya usavi manheru.
Musikana apedza kubika sadza, ndokuisa kapoto keusavi pastove. Paakavhura poto wanei mapisi 7 e towel rokugezesa zvakanyatsosangana nemadomasi. Musikana ndokubvunza mukomana, "wakadya nei mamheru", zvikanzi neguru. Mukomana akazoti ava kundoogeza, wanei guru riri mu shower rakatocheneruka sipo.
doro mbanje mukomana musikana
Kana usati wambodhakwa zvekuti unopinda mutoilet wogara paseat woedza kuisa seat belt ...haaaa hausati waapedyo nekurega doro saka iti ziiii zvidhakwa pazvinotaura
Munhu asingamwi doro idhongi
Mudzidzisi wakaisa mabuckets two, redoro neremvura. Akabva atinha dongi. Dongi rakasvika pabucket redoro ndokudarika, ndokuenda paneremvura ndokunwa.
Mudzidzisi akabva abvunza vana kuti vakanga vazidzei.
John: "Ini ndadzidza kut wese asinganwi doro idhongi!"
doro mudzidzisi teacher chikoro
Baba vamwa mushonga weshiri
Akawana murume wake akati rapata kurara pasi pemuti,kufema achifemera kurekure. Parutivi pake paine empty bhodhoro reEagle. Hoyo mukadzi mhere kwetsu, hanzi vanhuwee huyai mundionerewo murume wangu anwa mushonga weshiri!
Potai muchimwira kumba vakadzi vazive doro
doro mukadzi murume eagle lager
doro monya mupfana bhawa mhitsa
ZINARA Easter Message
"Don't drink and drive this holiday please because nema potholes ariko aya unozorasa doro rako."
and then rako!
doro drinking and driving easter zinara
Masasi ekupenga - Kuipa kwe doro
Pane nyaya yandaverenga mumagazine yandibata zvisingaite pamusoro pezvakaipira doro kana nanhasi hana yangu ichiri kungorova zvekuti kubva nhasi ndasvipira mate pasi handife ndakabata chinhu chinonzi magazine futi!
doro masasi ekupenga
Handibudi panze husiku
Mhofela ne shamwari yake vakanga vakagara pamoto vachimwa havo ngoto (7 days). Mbuya va Mhofela vakanga votsumwaira vari pamoto zvikanzi:
Mhofela: mbuya chiendai munorara muchawira mumoto.
Mbuya: Ndakamirira chi-5Litre changu chamuri kunwira doro. Ndochemba yangu handirari ndisinayo. Handidi zvekubuda buda panze husiku!!!!
doro chimbuzi mbuya
Murora navamwene - anobvisa ndiyani
Muroora: Haloo mhamha
Vamwene: Hes mwanangu varisei vamwe?
Muroora : varinani havo, ndine mubvunzo mhamha..
Vamwene: sununguka mwanangu
Muroora : mwana akazviitira tsvina anofanira kubvisa ndiani?
Vamwene : amai vacho ka ndovanobvisa mwanangu... Otoita mwoyo wekubereka.
Muroora : maita basa mhamha, in this case mwana wenyu adhakwa abva azviitira tsvina saka mosvika nguwai kuzobvisa??
doro murume muroora manyoka vamwene
Chinoz - svomhu
Mwana: nhai baba 1+1chii
Mwana: ko 2+2
Mai: vanomboziveyiko baba vako daiwabvunza zvehwahwa
Chinoz: 2 mascuds ka
Mwana: 2 mascuds+2mascuds
Chinoz: 4 mascuds
Chinoz: ratova crate kkkkkkkkkkkkk
doro chinoz svomhu scud
Imbwa ichizamiwa doro
Teacher vakaisa mvura nedoro in different dishes and took a dog. Imbwa yakabva yamwa mvura ikasiya doro then the teacher asked vana kuti vadzidzei . Tindo akabva ati ndadzidza kuti wese asingamwi doro imbwaaa
doro imbwa mhuka
doro bhawa kukara
doro hure bhawa jairos jiri chimumumu
Baba:Nhai mai mwana,ko mutoilet maisa light re automatic?
Amai: nemhaka yei madaro baba?
Baba: ndikungomuka ndovhura door light roto lighter,ndovhara rodzima.
Amai: Nhai imi matanga futi system yenyu yekuwetera muFiriji kana madhakwa
doro mukadzi murume chidhakwa
Unenge uchitengerwa tuma super kubhawa neboys apa wazvimbirwa waakudawo lager unoti chii?Unoti 'boys dzangu super mandiwanzira'???
doro Super Mandiwanzira Chibuku masese
Yeast muma hewu nema fetikuku
Mwana: Nhai Mhamha maheu nedoro zvakasiyana chii?
Mama: maheu haaiswe yeast, doro rinoiswa yeast ndosaka richidhaka.
Mwana: saka pamunoisa yeast muma fetikuku paya ndosaka muchizopopota stereki nhai, munenge madhakwa!
Mwana: yeast iya yatanga futi
doro mahewu kudhakwa fetikuku
Munyati wemabond notes unonetsa kuhwisisa!
Kwahi shandisai mapepa, asi anenge akamiririra mari chaiyo, inenge yakachengetwa kubank. Kureva here kuti doro rikaita shoma kudelta vanogona kungoisa mvura mumabhotoro vovhara voti chimwai nekuti mvura iyoyo yakamiririra doro riri kudelta - bond beer?
doro bond coin reserve bank of zimbabwe bond notes
Munhu asingamwi doro imbwa!
Teacher vaida kuratidza vana kuti doro rakaipa vakaisa doro munerimwe dish rimwe ndokuisa mvura vakatora imbwa kuti imwe imbwa yakasiya doro kwakumwa mvura, Teacher vakabvunza kuti madzidzei, vana vakati tadzidza kuti munhu asingamwi doro akangofanana nembwa
doro mudzidzisi chikoro imbwa
Rondedzero ine mazwi anodarika 120
Yemateacher yekuda kunetsa iyi. vana vanzi nyora rondedzero ine manzwi anodarika 120:
China 15 Ndira 2015
Pazororo reKisimusi ndakafara chose.Vana mukoma vangu vakati handei tinovhima.Takaona tsuro ndobva tatanga kudeedzera tichiti iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo kusvika taishaiwa ndobva tadzokera kumba.
doro mudzidzisi chikoro Kungwara rondedzero
doro bhawa svomhu
Driver iwe speed yako yakawandisa
Zvidhakwa 3 zvakakwira taxi zvakadhakwa heavy. Taxi driver akangostarter mota akabva adzima akati tasvika vasina kumbofamba Chidhakwa 1 chakaburuka chakatenda;chidhakwa 2 chakaburitsa mari chikabhadhara. Chechi 3 chakapa driver zimbama. Driver akafunga kuti raona zvaitika akabva abvunza kuti ko wandiroverei? Chidhakwa chikati speed yako yakawandisa, ko dai watiuraya
doro kombi chidhakwa
Doro raka rambwa nembwa
Unotonzwa munhu achiti andinwe doro, nekuti rakarambwa nembwa.Doro rakanyatsonyorwa kuti "Not for sale to persons under 18".Ndeipi imbwa yawakamboona ichisvitsa 18 yrs dzekuzvarwa saka ingagonwa doro sei iyo iri under age. Rega tihudzase isu Festive season iyi vamwe vakamirira kuti imbwa dzisvitse 18 yrs dzigotanga kunwa.
doro imbwa christmas
Muchengeti wenyama nedoro parufu
If yu think money is the only thing that changes step yemunhu then hamusati maona munhu ane key dzepanogara nyama nedoro parufu
Ko iko kuzoda kuenda pakahwanda kuti atsvagwe
doro nhamo rufu nyama
Ngazvigumire kuchingwa... toridonhedza
Ngazvigumire kuchingwa, sugar ne cooking oil ikoko!
Gamba renyu rikangouya ku HWAHWA
Toridonhedza mangwana chaiwo
doro Amai Grace Mugabe (PHD) Emmerson Munangagwa inflation
doro zanu bhawa elections 2018
mbanje - mozoti Zanu haigoni
Reporter: “VaMnangagwa hanzi makuzviziva here kuti doro rakupera munyika?”
Mnangagwa: “Tozviziva thats why we legalized mbanje we are always ahead in terms of planning.”
Mozoti ZANU (PF) haigoni
doro mbanje Emerson Mnangagwa
kukara doro nguva yana Jesu
Pama shamwari ako hapashaikwe one munhu wekuti dai aiveko the time Jesus converted water into wine, aizoswera zuva rese achimuteverera ne 20Litres yemvura achiti, "MaBoss chero mukandiitira masese haina pressure."
doro masese jesu
Mbuya vaviga doro rangu
Mbuya vaviga doro rangu,
Neniwo ndaviga mapiritsi avo eBP
Ngakufiwe kana kuchifiwa